ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, April 07, 2009
ကောင်းကင်ပြာ April 7, 2009 at 11:02 AM
အဲလို မရဘူးလေ ညီမလေးရေ၊ ကွက်ပျောက်တော့ ရှိက်ချင်တာပေါ့
My Diary April 7, 2009 at 4:15 PM
နာမကျန်း ကြာရှည်မဖြစ်ဘဲ . . . ခဏအတွင်းမှာ သေခြင်းကို ကူးပြောင်းချင်စိတ်ပေါ်လာတယ်. . .(မှန်တယ်နော်)
Welcome April 7, 2009 at 4:33 PM
လောကကြီးမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ခွင့်ရှိရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပါ။
မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ လောကသဘာဝကို ခါးဆီးခံဖို့ လူဖြစ်လာတာမို့
ပြုံးပြုံးလေး ကြိတ်ခံပေအုန်းပေါ့နော်။ မနာမကျင်ပဲ ငြင်ငြင်သာသာနဲ့ ကွက်ကျော်သွားတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီး ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့က တရားဓမ္မကို ယုံ၂ကြည်၂နဲ့ လုပ်လာတဲ့ သူတွေဖြစ်တယ်။
မိုးမြင့်တိမ် April 7, 2009 at 9:08 PM
ဘာသာတရားကို သက်ဝင်ယုံကြည်စွာ လေ့လာလိုက်စားရင်တော့ အဲဒီ့အဆင့် မပျောက်ရင်တောင် အသက်သာဆုံး နည်းနဲ့ သေဆုံးရတတ်တယ်။ နောင်သံသရာအတွက်လည်း အကြိုးရှိတယ်လေ။
အလှတရား April 8, 2009 at 12:20 AM
Anonymous April 8, 2009 at 3:49 AM
အင်း ..လောကဓံတရားကို ဘယ်သူမှ မကျော်လွန်နိုင်ကြတာဘဲ..ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ရင်တာ ဘယ်လို ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာဘဲ ကြိုးစားရမှာပေါ့
ဆုရည် April 8, 2009 at 8:01 AM
ဆောင်းပါးရှင် (ဦး)ဆောင်းဝင်းလတ် ကိုရော
ပြန်လည်ဖော်ပြပေးတဲ့ (မ)ပန်းကဗျာ ကိုရော
မောင်ကောင်း April 8, 2009 at 6:25 PM
ရပါတယ်ဗျာ.. နာခြင်းဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို လက်ခံတတ်မယ်ဆိုရင် မနာတော့ပါဘူး.. ဆရာတော်တစ်ပါးဆုံးမသလိုပေါ့.. ဘာရောဂါတွေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပဲဖြစ်နေပါစေပေါ့.. အမြဲနှလုံးသွင်းပါတဲ့..
နောက်တစ်ခုက ဝေဒနာသည်ငါမဟုတ်.. ဝေဒနာသည်အနိစ္စ ဆိုတာလေးပါ.
မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးမှာ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျမ်းမာပါစေ...
အဘိုးနဲ့ အဘွားမဆုံးခင် ဆေးရုံမှာတက်နေတုန်းကလည်း ခုလိုပဲ တွေးခဲ့မိဖူးတယ် ဒါပေမယ့် လည်း ... ဒါပေမယ့် ပါပဲလေ ..... နာခြင်းဆိုတာကို မကြုံရပဲ တန်းကနဲ သေချင်ပြီကွာ ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ သေသွားနိုင်ရင်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ ... ဒါပေမယ့် အဲဒီ့စိတ်ကူးကြီးကလည်း သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်တော့ ဒီလောက်မကောင်းသေးဘူး ... သေချင်ပြီဆိုပြီး သေလိုက်ပြီးတော့မှ နောက်ဘဝရောက်လို့ အခြေအနေမကောင်းရင် ဒုက္ခ ... အဲတော့ သေချင်ပြီဆိုတဲ့ အချိန်ကို နှစ်မျိုးနှစ်စား ထပ်ပြီး ကျွန်တော်ကတော့ခွဲထားချင်တယ် .. အစမ်းသေနဲ့ အစိန်သေဆိုပြီးတော့လေ :D ... သေချင်ပြီဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ပထမဆုံး အစမ်းသေကြည့်မယ် ပြီးရင် နောက်ဘဝကို သွားကြည့်မယ် အခြေအနေကောင်းရင် အစိန်သေမယ်ဟေ့လို့ ပြောလိုက်မယ် ... အခြေအနေမကောင်းရင်တော့ ဒီဘဝလေးမှာပဲ ပြန်နေလိုက်ဦးမယ် :D
mgnge April 9, 2009 at 3:26 AM
ဒီစာလေး ဖတ်ပြီးမှ ပဲ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြောတဲ့ 
စကား ကို သွားသတိရတယ်..။
ငါချစ်တဲ့ သူတွေ မသေခင် ငါအရင်သေချင်တယ်တဲ့...။
သူ လည်း ကွက်ပျောက်ရိုက်ချင်ပုံရတယ်...နော်..။
အမှည့်တ၀င်း ၀င်း အကင်းတစ်ဖုတ်ဖုတ်တဲ့...။
အို မှမဟုတ်ပါဘူး..။ ငယ် ဘ၀နဲ့ လည်းသေနိုင်တာပဲ..။
မိုးမြင့်တိမ်ေ ပြာသွားသလို ပဲ
ကွက်ပျောက် ရိုက်ချင်တဲ့ နေရာတွေတော့ အများကြီးပဲ။ :P ဒါပေမယ့် သဘာဝကို ကျော်လွန်လို့ မရတော့လည်း ပုံမှန်ပဲ ရှင်သန်ကြရတာပေါ့။ သဘာဝကို ကျော်လွန်တာတွေကလည်း မကောင်းတာ များပါတယ်။ သဘာဝကိုပဲ ကြိုးစား ရင်ဆိုင်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ် မပန်းကဗျာ။
Anonymous April 11, 2009 at 3:35 PM
မှတ်သားစရာတွေ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးတာ ရှဲရှဲ ပါဗျာ။
ညခင်း April 28, 2009 at 5:42 PM
ကွက်ပျောက် ရိုက်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။ကွက်ပျောက်တော့ ရိုက်လို့ မရဘူး
ကွက်ပျစ်တော့ ကြိုရိုက်ထားမှ...သေရင် အပုပ်ကောင်ကြီး နံတယ် ဆိုပြီး ကွက်ပျစ်နဲ့ အိမ်ပြင်ထုတ်ထားခံရမှာ။ အော်... အို နာ သေ မလွတ်ပါလား။